2018 Global LED Digital Display iyo Micro LED Display Market Muuqaalka- LEDinside
Sida laga soo xigtay warbixintii ugu dambeysay ee ka timid LEDinside, qayb ka mid ah shirkadda cilmi-baarista suuqa ee TrendForce, 2018 Global LED Digital Display iyo Micro LED Display Market Outlook, sababo dhaqaale xumo awgeed, suuqyada caalamiga ah ee loo yaqaan 'LEDdisplay suuqa' waxay la kulmeen koboc xaddidan iyo baahida suuqa ee muuqaalka dhaqameed ayaa hoos u dhacay. Si kastaba ha noqotee, iyada oo ay ugu wacan tahay horumarinta muuqaalka garoonka ee sanadihii la soo dhaafay, baahida suuqyada ayaa mar kale kordhay. Sannadkii 2017, qiyaasta suuqyada caalamiga ah ee muujinta LED-ka ayaa gaadhay USD 5.092 bilyan. Bandhigga garoonka ee wanaagsan (≤P2.5) wuxuu si isdaba joog ah u ilaalin doonaa koritaanka ka dib markii uu la soo kulmay horumar deg deg ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay, iyo qiyaasta suuqa ee 2017 wuxuu ahaa USD 1.141 bilyan iyadoo CAGR ee 2017-2021 la filayo inuu gaaro 12%.
Isbeddel Suuqa Muuji
Sannadkii 2017, qiyaasta suuqyada caalamiga ah ee muujinta LED-ka ayaa gaadhay USD 5.092 bilyan. Bandhigga garoonka ee wanaagsan (≤P2.5) wuxuu si isdaba joog ah u ilaalin doonaa koritaanka ka dib markii uu la soo kulmay horumar deg deg ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay, iyo qiyaasta suuqa ee 2017 wuxuu ahaa USD 1.141 bilyan iyadoo CAGR ee 2017-2021 la filayo inuu gaaro 12%.
Marka la eego iftiinka muuqaalka muuqaalka garoonka ee LED, waxaa loo qaybin karaa afar qaybood sida hoos ka muuqata. Codsiga warfaafinta (Hoolka); Qolka amniga iyo kontoroolka (qolka ilaalinta iyo ilaalinta); Codsiga muujinta ganacsiga (oo ay ku jiraan bandhig ganacsi, bandhig, qolka shirarka shirkadda, qolka shirarka hoteelka iyo tiyaatarka, iwm); codsiga dadweynaha iyo tafaariiqda (inta badan oo ay ku jiraan bandhigga banaanka, garoonka diyaaradaha, metro iyo tafaariiqda). Bandhigga ganacsiga, goobaha dadweynaha iyo tafaariiqda ayaa leh mustaqbalka kobaca ugu weyn. Bandhigga LED wuxuu tartiib tartiib u beddeli doonaa DLP iyo LCD.
Sanadkii 2016, qiyaasta suuqyada soo bandhigida LED-ka waxay ahayd USD 5.001 bilyan siddeed soosaarayaasha ugu sarreysa waxay qaateen 38% saamiga suuqa adduunka. Kuwaas waxaa ka mid ah, heerka caalamiga ah ee muuqaalka garoonka wanaagsan ee LED-ka ayaa gaaray USD 854 milyan sanadkii 2016. Marka la fiiriyo dakhliga soo saarayaasha, 7-da shirkadood ee ugu sarreeya waxay ka yimaadeen Shiinaha, Daktronics-na waxay qaadataa kaalinta sideedaad. Saameyn weyn oo hoggaamineed, 8-da shirkadood ee ugu sarreeya ayaa gebi ahaanba qaadanaya 78% saamiga suuqa adduunka, LEDinside waxay ku qiyaaseysaa in suuqa bandhigga wanaagsan ee LED-ka uu sii wadi doono sii wadida koritaanka degdegga ah ee 2017.
Isbedelka Suuqa LED
Display qiimaha suuqa LED-ka ee sanadka 2017 ayaa la filayaa inuu yimaado USD 1.63 bilyan, waxaana la saadaalinayaa inuu gaarayo 1.94 bilyan oo doolar sanadka 2021. Kobaca muuqaalka muuqaalka wanaagsan ee LED-ka ayaa gaabis ah, laakiin muuqaalka garoonka fiican ayaa wali ah awooda ugu weyn ee kor u qaadista baahida muujinta LED-ka. .
Sida laga soo xigtay LEDinside, shanta ugu sarreysa ee soosaarayaasha dijitaalka ah ee soo saarayaasha LED-ga dakhliga adduunka oo dhan waa MLS, NationStar, Everlight, Kinglight iyo CREE. Intaa waxaa dheer, shanta ugu sarreysa ee muuqaalka dhijitaalka ah ee soo saareyaasha 'LED chip' ee dakhliga (iibinta dibedda) adduunka oo dhan waa San'an Opto, Epistar, HC Semitek, Silan Azure, iyo ChangeLight.
Isbedelka Suuqa Darawalka IC
Lagu wado muuqaalka LED-ga ee wanaagsan, muuqaalka suuqa ICs darawalku wali wuxuu hayaa koritaan deg deg ah. LEDinside waxay ku qiyaastay in miisaanka darawalka bandhigga ICs uu gaadhay USD 212 milyan sanadkii 2017. Sida laga soo xigtay baaritaanka LEDinside, shanta shirkadood ee ugu horeeya soosaarayaasha darawallada ICs waa siday u kala horreeyaan Macroblock, Chipone, Sumacro, Sunmoon, iyo My-Semi, oo matala 92% wadarta suuqa. wadaag. Soosaarayaasha kale waxaa ka mid ah Developer Microelectronics iyo Texas Instrument, iwm.
Iyada oo laga jawaabayo isbeddelka suuqa ee cidhiidhiga garoonka, LED wuxuu u dhaqaaqaa seddex teknolojiyad, oo ay ku jiraan COB ganaax fiican, Faylka QD wuxuu gaarayaa farsamada RGB, iyo muuqaalka Micro LED. Intaa waxaa dheer, faa'iidada muuqaalka Micro LED waxaa ka mid ah xagal ballaadhan, iftiin sare iyo isbarbar dhiga, tayada sawirka oo sareysa, iyo Sawir aan muuqaal lahayn. Dhanka kale, ciyaartooyda bandhig dhaqameedka iyo ciyaartooyda LCD ayaa qorsheynaya inay soo galaan suuqa soo bandhigida Micro LED iskaashi iyo isbahaysi.